Luulyo 13, 2017 2:34 b 1
Saraakiisha waaxda cashuuraha dalka Spain ayaa baadhitaano lama filaan ah ku sameeyay Cristiano Ronaldo iyo qoyskiisa oo hada fasax ku qaadanaya Balearic Islands. Fasax, the rich and famous iyo paparazzi yaa ayana kala reebi doona!
Tan canshuuraha, waayahaan rag badan baan canshurta bixin oo la dabajoogaa uuna ugu danbeeyey laacib sare Leo Messi. Illeen canshuur ka cararku Soomaali gooni uma aha!
Dhanka kooxda Barcelona ayaa dhigooda Benfica waxayna kala xaajoonayan arinta ku saabsan in naadiga Barelona ay helaan ciyaaryahanka lagu magaacabo Nélson Semedo.
Saaka & Xubintii Ciyaaraha iyo cRaxmaan Yameni (dhegayso) Saaka & Xubintii Ciyaaraha iyo cRaxmaan Yameni (dhegayso)
Caawa & Daljir iyo Axmed Sh. Maxamed Tallman (Tallman)
sakariye saed Mohamed 2 months
wararka waan kahelaa waxaaan rajahynayaa inaan soo dhaweey xubinta cayaaraha I love the foot ball